LA-TALIN LOO SAMEYNAYO QAXOOTIGA | albatros-direkt.de
La-talin loo sameynayo Qaxootiga iyo Muhaajiriinta
Albatros Direkt waa halka aad si fudud uga heleyso la-talin afka hooyo ah oo lacag la'aan ah. Waxaan adiga iyo qoyskaagaba kaa caawineynaa xaalad kasta. Fadlan nala soo xiriir. Waxaan rajeyneynaa inaad wada-hadal nala yeelan doonto.
LA-TALIN ONLINE AH
Waxaan nahay koox yar. Si kastaba, bar-tilmaameedkeenna waa in allaale inta ay suuragalka tahay in Qaxootiga/Soo-galootiga ay na heli karaan, si aan ugu suuragalinno la-talin afkooda hooyo ah oo ay kooxdeenna la-taliyeyaasha bixinayaan. Waa taas sababta Albatros-Direkt.de ay u hirgalisay hab online ah oo muuqaal leh oo ay si fudud oo dhib yari ah nagula soo xiriiri karaan Internet-ka. Dhammaan luqadaha kor ku xusan online-ka waa laga heli karaa. Kaliya gal, ballan qabso oo la sheekeyso la-taliyeyaasheenna.